Wadaaddadii hore qaarkood waxay dabeecadda noocaan ah gaarsiiyeen heer aad u sarreeya, oo waxayba allifeen xaddiisyo ay ku been-abuureen mudane nebi Maxamed csw, waxaana xaddiisyada beenta ah ka mid ah mid sheegaya in su’aalaha badan lagu halaagsamo! Waa been nebiga csw laga sameeyey, oo ay allifeen dad aan isku kalsoonayn oo aan karti u lahayn in ay dadka ka qanciyaan su’aalaha maskaxaha kala duwan ku wareegaya.
Waxaa la wada og yahay in uu nebigu scw isku kalsoonaa, oo uusan u baahnayn in uu dadka cabburiyo, laakiin waxaa hadal aan ka suurtoobin ka sameeyey kuwo haawey ahaa oo rabey in aan ujeeddadooda laga dabohadlin, oo ay dadku weligood iyo weligood ugu xeraysnaadaan moorada saboolnimada iyo maangaabnimada.
Su’aal kasta su’aal kale ku xiji oo raadi jawaab aan nacasnimo ahayn oo xukun ku saabsan. Qof kasta oo in uu dad xukumo ku ordaa waa nacas aan nolosha fahmin! Xataa haddii uu yiraahdo Rabbi baa i soo diray waa nacas! Imisa shaqo oo xukun ka fiican baa adduunka ka jirta? Maxaa shaqooyinka midda ugu liidata ku salladay haddii uusan caaq ahayn? Bulshoba midda ay la wacyi liidato waxaa ku sii bata kuwa xukunka jecel!